Ibhokisi yokuhlangana yombane (ekwabizwa ngokuba yi "jbox") yindawo evaliweyo yokudibanisa umbane. Iibhokisi zeJunction zikhusela uqhagamshelo lombane kwimozulu, kunye nokuthintela abantu ekuhlaselweni ngombane ngengozi.
Iibhokisi zeJunction ziyinxalenye yenkqubo yokhuselo lwesekethe apho kufuneka kubonelelwe ukuthembeka kwesekethe, njengokukhanyiswa okungxamisekileyo okanye iintambo zombane zongxamiseko, okanye iintambo phakathi kwesixhobo senyukliya kunye negumbi lolawulo. Kolo fakelo, ukuthintela umlilo ecaleni kweentambo ezingenayo okanye eziphumayo kufuneka kwandiswe ukukhusela ibhokisi yokudibanisa ukuthintela imijikelezo emifutshane ngaphakathi kwebhokisi ngexesha lomlilo ngengozi.
Ukucaciswa kweeparameter zoMbane, iiParameter zoMbane kunye neParamitha yoLwakhiwo:
1.Izibane zethu zezikhukula ze-LED ezifakwe ngokulula kunye nebhokisi yebhokisi yokuhlangana okanye ngokuthe ngqo eludongeni. Kulula ukubiya ngocingo kwaye zifuna ulondolozo oluncinci kakhulu. Kwaye isibiyeli seAngle esilungelelanisiweyo siqhubela phambili ukufakela
2.Khawuleza, kulula kwaye kulula ukuyisebenzisa kwaye akukho zixhobo zeNgcali ezifunekayo.
3.Le mveliso inomzimba wesibane esine-ultra-thin kunye ne-Uniform yezindlu zezibane ezineempawu, yenza ukuba ukukhanya konke kubonakale ngakumbi kunombala kunye noyilo lokuyila kunezinye iimveliso. Imveliso inobomi benkonzo ende, ikwafaniswa nesibane semveli se-halogen, imveliso yethu inokugcina ngaphezulu kwe-80% yamandla.
Ukukhanya kwe-4. imiboniso yorhwebo, imiboniso kunye nendawo ofuna ukuyifaka kuyo.
Egqithileyo Ukukhanya koMkhukula oKhanya nge-Pir Sensor
Okulandelayo: Ukukhanya koMkhukula weClassic
Ukukhanya koMkhukula oPhezulu
UkuKhanya koMkhukula okungcono onokutsha kwakhona
Izibane zoMkhukula eziphathekayo
Ukukhanya koMkhukula weBattery ePhathekayo
Ukutsha kwakhona kweziLambo zoMkhukula